15KW Fahombiazana avo lenta mpamaky Modules, mpamatsy - China 15KW Haingam-pandeha mamaly maody modely Factory
15KW andian-dahatsoratraEV miverina rectifieris novolavolaina manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia manana anton-kery avo, fahombiazana avo, haavon'ny herinaratra, fahamendrehana avo lenta, fifehezana manan-tsaina ary tombony amin'ny bika. Ny teknika fanaraha-maso nomerika pluggable sy marani-tsaina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana ary hiantohana ny fahamendrehana avo lenta.
Ny modely famandrihana UR75020-W dia novolavolaina manokana ho an'ny charger super DC. Izy io dia mirehareha amin'ny tombotsoan'ny fanitsiana ny hery avo lenta, ny fahombiazana avo lenta, ny haavon'ny herinaratra avo, ny fahamendrehana avo lenta, ny fifehezana manan-tsaina, ny endrika kanto ary ny fibodoana kely. Ny famolavolana lozisialy avo lenta sy ny teknika fanaraha-maso nomerika marani-tsaina dia miara-miasa mba hisorohana mialoha ny tsy fahombiazana ary hiantohana ny fahamendrehana avo lenta.